Site na: KongoLisolona: Ọktoba 10, 2020 00: 45 Enweghị asịsa
Mgbe o gbusịrị mmadụ, gbuo ya, dinaa ya n'ike, mee ka ọtụtụ nde mmadụ bụrụ ohu Ojii / Africa, Ndi Ocha anoghi na mgbe ikpeazu ha. Dị ka a ga - asị na nke ahụ ezughi, ha ji obi ọjọọ gbanwee ihe ndị a Ojii / Africa gaa na nke ndi Kristian ma gwa ha na: "Chineke bụ onye ọcha, ndọrọ ndọrọ ọchịchị naanị maka ndị ọcha". Na na, ma ọ bụrụ na mgbe Ojii / Africa chọrọ otu ụbọchị izute Chineke ma ọ bụ ghọta ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ha kwesịrị, nke mbụ, "Gbaghara ndị Ọcha maka ihe niile emere ha". Naanị ebe a: ha emeela ya.
N'akụkụ nke ha, ndị Ojii / Africa kwuru: ee - Amen! Ya mere, hụrụ n'anya Ndi Ocha, Ndi aka ochie bu ndi Chineke!
Ikpeazụ ahịhịa bụ na kemgbe ahụ ọtụtụ Ojii / Africa emewo ka ndị ọcha tọghatara ndị mmadụ. Offọdụ n'ime ha na-alụ ọgụ, oghe na mbọ, ịgbachitere, "okpukpe ụgha Ndị Kraịst na ndị ọzọ abụrụla ndị na-agbachitere ndọrọ ndọrọ ọchịchị ndị mmụọ ọjọọ nke White / West ". N'otu oge ahụ, Ojii / Africa na-eduga na mkpọsa iji kọwaa ihe ọ bụla metụtara okpukpe ha na ụkpụrụ ọdịnala na ọdịnala nke ha.
Nke a bụ ihe mere taa ndị ọcha na-abụ abụ, ha na-akụ oge, ndị ojii / ndị Afrịka na-abụ abụ na-ete ukwe nke ọchịchị ọcha. Ọ bụ ụzọ kachasị mma maka ha(Ndị ọcha) iji hụ na njikwa nke nchịkwa ojii / Africa gafere ụwa.
Na May 2, 1980, Pope John Paul nke Abụọ na njem mbụ ya na Zaire: eziokwu elegharaghị anya nke katọọ ajụjụ Katọlik; n'agbanyeghị na n'afọ ndị 2000, Pope John Paul II rịọrọ mgbaghara maka mpụ ndị Churchka Roman Katọlik mejọrọ kemgbe ụwa, ajụjụ ndị metụtara ajụjụ a ka na-ewe iwe, ndị ụkọchukwu anaghị enwe mmasị ihe niile anyị na-ekwu maka ya; nke a na-ekwupụtabeghị ihe a na-akpọ obscurantism okpukpe buru ibu
Ọkt30 07: 13